War Degdeg Ah: Hamaha Shidaalka Berbera oo Lagu Shubay Markabkii Labaad oo Siday Shidaal Xun oo Xabagleh iyo Boqolaal Gaadiid ah shidaalka lagu shubay dhex-da u fadhiistay Jidka Berbera iyo Hargeysa ...
Thursday April 12, 2018 - 19:08:47 in Wararka by Super Admin
Berbera(Xogreebnews)-Guddida maamusha Haamaha Kayd Shidaalka Berbera, ayaa shalay shubay Markabkii labaad ee siday Shidaal xun oo Xabagleh, kaasoo lagu magacaabo Barakaale Read Sea, halkaa markabka labaad ee isna laga shubay lagu magacaabo Pearl Red Sea, isla markaana si toosa waxa looga iibinayey Kaalmaha Kala duwan ee Somaliland.
Hase-yeeshee waxa taas ka gadooday boqolaal Booyadood oo hor tuban xarunta Kaydka Shidaalka berbera, kuwasoo diiday inay qaadan, balse boodhka maamula kaydkaas, ayaa ku hawlan sidii ay ugu qancin lahaayeen qaadashada shidaalkan xun.
Teeda kale, todobaadkii hore ayey ahayd, markii sidan oo kale markab siday Shidaal xun, uu lagu shubay. Iyaddoo shidaalkaasi si toosa usoo galay suuqyada iyo kaalmaha dalka, ayaa khasaare lexaad leh gaadhsiiyey kumanaan Baabur ah. Wariye ka tirsan Shabakada Warar ee Xogreebnews.com, oo safar kusoo maray jidkaa dhexe ee Berbera iyo Hargeysa, ayaa indhihiisa kusoo arkay gaadiid badan oo dhexda u fadhiya cilaad shidaal xunoo ay kusoo shubteen. Khasaaraha lexaadka leh ee gaadhay baaburta shacabka haleelay, ayaa la garanayn meel loo raaco iyo cid dabiibkiisa Kala qayb qaadatay